Sida loo xakameeyo hinaasaha | Niman qurux badan
Sida loo xakameeyo masayrka
Masayr waa wax aan la rumaysan karin ilaa ay dhab ahaantii ka gudbaan maskaxdaada. Ma dareen baa mise cillad baa la wajihi karaa? Run ahaantii iyo gudaha waxaan aaminsanahay Waa wax dabiici ah waana in aan aaminsanahay nafteena iyo qofka kaleba awood u leh inuu xakameeyo xaasidnimada.
Waa in loo aqoonsadaa taas Masayrku waa caddayn weyn oo jacayl ah laakiin wuxuu ciyaari karaa khiyaamo aad u xun haddii ay xad dhaaf yihiin. Haddii aan la xakameynin, waxay keeni karaan natiijooyin dhimasho leh. Haddii mid ka mid ah labada xubnood ee lammaanaha ah uu aad u masayro, waxaa laga yaabaa in xiriirku bilaabo inuu burburo oo daciifo.
1 Maxaad u dareentaa masayr?
2 Maxaan sameyn karnaa si aan u xakameyno hinaasaha?
Maxaad u dareentaa masayr?
Masayr waa jawaab qiiro leh in qof uu ku xanuunsado marka uu dareemo hanjabaad suurtagalnimada in uu lumiyo wax loo arko in ay iyagu leeyihiin. Dareenkaas waxaa abuura ammaan darro, adigoo aaminsan in qofka aad jeceshahay ayaa fiiro gaar ah u leh mid kale.
Lama oga goorta xaaladan oo kale ay dhalatay. Qofku wuxuu hore u awooday inuu la kulmo xaaladdan. malaha markaan yaraa iyo imaatinka walaal. Ama laga yaaba oo leh marxaladda qaan-gaarnimada waayo-aragnimada u dhaxaysa saaxiibbada iyo jacaylka ugu horreeya.
Qof ammaan darro badan leh waxay muujisaa xaasidnimo, marar badan oo ka mid ah waxay ka yimaaddaan xiriirrada kale ee jacaylka ama khibradaha xun ee xiriirka qoyska.
Midkale ayaa ah dareen lahaansho xaaladdaasna waxa ay la abuurtaa dhammaan dadka aad jeceshahay, labadaba asxaabta iyo qoyskaba. Falkan ayaa inta badan lagu eedeeyaa kalsooni yar wax lagu shaqeeyo.
Waxaa jira isku day inaad xakamayso xaasidnimada Haddii aad waligaa dareemaysay oo aad ogtahay in marar kale ay xaqiiqadani kaa ilaalinaysay. Waad awoodaa u sheeg welwelkaaga qof aad ku kalsoon tahay, laakiin xaaladdan ha ku mashquulin, sababtoo ah waxay u ekaan kartaa paranoia. Qofka ku lugta leh sidoo kale ma ogaan karo "si buuxda" Dareenkaaga, maadaama uu noqon karo la kala qaado oo uu ku xidho xidhiidh sun ah.
Maxaan sameyn karnaa si aan u xakameyno hinaasaha?
Waxaa jira isku day inaad dhisto dhammaan aasaasyadaas taasi waxay keentaa in qofku dareemo masayr. Runtii waa inaad garawsato dhibaatadan haddii aad dareemayso oo aad dareemayso sabab la'aan. Saldhigyadaas gudahooda waa inaan qiimee amni-xumadayada iyo isku kalsoonaanta hoose oo ka shaqee dhammaan.
Waxaa jira xoojiya dhammaan ceebahaas sababtoo ah sidaas ayaanu ku noolaan karnaa nolol aad u dulqaad badan. Looma baahna in la dhaawaco Wixii na dhibaya, waa shardi madaxdeena in aan ku sii nasanno wax ina xumaynaya. Dhammaan fikradahaas waa in lagu kabaa fikrado kale, ma ahan wax sahlan sidaas darteed waa in aad ka shaqeysaa maalin kasta.
Ha isku dayin inaad ogaato muxuu samaynayaa qofkaasi si joogto ah. Shabakadaha bulshada Waxay yihiin qaybta noo ogolaanaysa in aynu aragno qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha uu qofka ku tamashleeyo, walaaciisa iyo hawlihiisa. Haddii aadan xamili karin shucuurtaada adigoo xalinaya xaaladan waxaa fiican inaad iska tuurto, waxaad isku xiri kartaa waqti ka waqti si aad u xasuusato inaad ka gudbi karto. Laakin hadii aysan noqon karin gabi ahaanba xidhidhkii
Waxaa jira isku day inaad sare u qaaddo hanka nafta labada dhinacba. Ka fakar in qofkaas uu ku doortay in uu kula joogo oo haddii aad sii waddo beerista qaddarintaada hooseeya iyo xaasidnimadaada. aakhirka ma rabi doono inuu kula joogo. Sifadaada iyo qaabka aad u tahay waa waxa isaga ku dhaliyay inuu ku jeclaado, sidaa awgeed wax kasta oo aad haysato wuu ku qiimeeyaa taasina way ku xoojinaysaa.
Ha isku dayin inaad ciyaarto ciyaarta "masayrka".Waa laga yaabaa inay shaqeyso, laakiin mustaqbalka fog ma wanaagsana. Waxay beddeleysaa gudbinta kalsoonida labada, tan iyo markii aan dareemeyno inaanan dareemeynin cadaadis saa'id ah. Kalsoonidu waa inay ka dhalataa labadaba, si loo xoojiyo xiriirkaas oo codka kalsoonida loo siiyo.
Waa inaad noqotaa mid dhab ah oo madaxaaga fikrado qurux badan ku beero, wax kasta oo taban waa inay dibadda u baxaan. Aad bay u fiican tahay inaan kaaga mahadceliyo wax kasta oo aad haysato iyo wanaagsanow, waxay noqon doontaa xaaladaada ugu fiican. Waa inaad u soo bandhigtaa kalsoonidaada sida aan horeyba dib u eegnay, faa'iidada shakiguna way jiri kartaa, laakiin adigoon si joogto ah u sheegan hinaasahaas.
Habka ugu wanaagsan ee meelaynta xiriirka waa Isku day inaad la hadasho qofka kale oo u sheeg sida aad dareemayso. Waxaa laga yaabaa in ay tahay kaliya masayrka pathological in aad ka shaqeyso. Ama waxaa laga yaabaa in uu yahay lamaanahaaga kan fikradan xad dhaafka ah leh oo u baahan in uu waqti badan la qaato dadka kale marka loo eego adiga. Hadalku waxa uu xalliyaa khilaafyo badan waxayna kaa caawinaysaa inaad fahamto dhammaan dhibaatooyinka aad ku sugan tahay.
Marar badan waxaan dareemeynaa ammaan darro iyo hinaaso sababtoo ah qofka kale ma gudbiyo kalsooni. Haddii ay ku tusto sir, ma furna, waxaad ku saxan tahay beenta, wayna adag tahay in la ansixiyo ballan. malaha taasi maaha qofka yaa la garab taagan yahay. Waa in aad boos ka dhigtaa oo aad naftaada ku xoojisaa in aad naftaada jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay in aad horeba u garan doonto qof aad uga wanaagsan. Haddii aadan heli karin qalabkaaga, waxaad mar walba caawin kartaa xirfadle.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo xakameeyo masayrka
Sida loo yiraahdo waan ku jeclahay adiga oo aan dhihin
Furaha farxadda lamaane ahaan